Kedu laptọọpụ Apple ị ga-azụ? Anyị na-enyere gị aka ịhọrọ MacBook
na A na-achọ ngwaahịa Apple nke ukwuu, Ọ bụghị naanị maka ọnụahịa ya, nke na-eme ka ha ghọọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe okomoko, kamakwa maka ịdị mfe ya, àgwà na imewe ya. N'ihi nke a, o yikarịrị ka a ga-anwa gị ịzụta laptọọpụ Apple, ọbụlagodi na ị bụghị onye na-akwado akara Cupertino.
Na mgbakwunye, ugbu a, ụlọ ọrụ apụl na-aga mgbanwe na ndị na-emepụta ya (Apple Silicon), na nke mbụ n'ime ha: ndị M1. Ihe mgbawa ọhụrụ a enwetala nsonaazụ dị ịtụnanya n'ezie, ọkachasị na arụmọrụ ike, n'agbanyeghị na ọ ka nwere ọghọm ya. Ọ dabara nke ọma, a ka nwere kọmpụta Intel x86 ọhụrụ ị nwere ike zụta dị ka ihe ọzọ na ARM.
1 Ahịa kacha mma taa na laptọọpụ Apple
2 Ụdị laptọọpụ Apple
2.1 MacBook Ikuku
2.2 MacBook Pro 13 anụ ọhịa
2.3 MacBook Pro 16 anụ ọhịa
3 Uru nke laptọọpụ Apple
4 Ebe ịzụta MacBook dị ọnụ ala
5 Aka abụọ ma ọ bụ laptọọpụ Apple emezigharịrị, ọ bụ ezigbo nhọrọ?
6 Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Apple dị ọnụ ala?
7 Laptọọpụ Apple, ọ bara uru ya? Echiche m
Ahịa kacha mma taa na laptọọpụ Apple
Ụdị laptọọpụ Apple
Apple nwere akwụkwọ ndetu nwere oke karịa karịa ụdị ndị ọzọ, ebe ọ nwere naanị usoro isi atọ, yana ụdị nhazi dị iche iche iji gboo mkpa dị iche iche. Iji nwee ike ịhọrọ nke kachasị agbanwe agbanwe, ị ga-ebu ụzọ mara usoro na ebumnobi ya:
ọ bụ kọmpat ngwaọrụ, nke nwere obere arọ yana profaịlụ slimmer. Na mgbakwunye, nnwere onwe ya dị elu karịa Pro, na ọnụ ahịa nke ịchụrụ ụfọdụ arụmọrụ.
Apple MacBook Air 13" -…
2017 Apple MacBook Ikuku ...
N'ikpeazụ, kọmpụta Apple ndị a bụ maka ndị na-achọ ngagharị ka ukwuu, dị ka ụmụ akwụkwọ chọrọ iburu ya n'ụlọ akwụkwọ, ndị chọrọ ịrụ ọrụ ma ọ bụ igwuri egwu mgbe ha na-eme njem n'ụgbọ njem ọha, n'ogige ntụrụndụ, wdg.
MacBook Pro 13 anụ ọhịa
Ndị otu a nwere ụfọdụ àgwà yiri nke ikuku, ebe ọ bụ na ọ na-ebuli otu panel nwere otu nha, ya bụ, ihuenyo 13.3 ".
Apple 13in MacBook Pro,…
Nke a na-eme ka ọ bụrụ kọmpat na ibu ya dị naanị ihe dị ka gram 200. Ya mere, ọ bụkwa ngwá ọrụ dị mma maka ịkwagharị, naanị na ọ nwere arụmọrụ dị elu, nke e mere maka ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị ọrụ chọrọ mgbakwunye.
MacBook Pro 16 anụ ọhịa
Ọ bụ otu ihe ahụ dị ka nke gara aga, naanị na ibu ya na akụkụ ya dị elu, ebe ọ nwere panel 16 ”. Ogo buru ibu nke ga-eme ka mmegharị gị na nnwere onwe gị dịtụ njọ karịa nke gara aga, mana nke nwere ike ịdị mma n'anya.
Na ọkwa ngwaike, ị nwekwara ike ịga maka nhazi dị ike karịa obere ụdị.
Na nkenke, ihe ngosi ka ukwuu na mpaghara ọrụ, nke nwere ike inwe ekele maka egwuregwu, imewe, wdg.
Uru nke laptọọpụ Apple
Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ma ị chọrọ n'ezie laptọọpụ Apple ma ọ bụ na ị chọghị, mara uru Ndị nwere ụdị ngwá ọrụ a nwere ike mechaa mee ka echiche gị doo anya na n'ikpeazụ kpebie otu n'ime ha. N'ime ihe ndị pụtara ìhè bụ:
Gburugburu ụwa: Apple na-enye ngwaike na ngwanrọ. Nke a pụtara na e nwere a mmachi ọnụ ọgụgụ nke Mac ụdị, ma e jiri ya tụnyere ndị na-abụghị Mac kọmputa Ma, na-azọpụta nke a erughị ala, a mode na-enye a nnukwu uru, ebe ọ na-enye ohere optimizing na sistemụ ka ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ kasị mma na ya. ngwaike dị adị. Kama, Windows kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma na kọmpụta dị iche iche (ASUS, HP, Lenovo, Dell, na ogologo wdg), mana ahazighị ya maka nke ọ bụla, yabụ na-egosi na arụmọrụ na arụmọrụ.
MacOS: Sistemu arụ ọrụ bụ nke ezinụlọ UNIX, onye ọ bụla maara uru * nix (FreeBSD, Linux, Solaris,…), nke nwere sistemụ nchekwa, siri ike ma kwụsie ike. Nke ahụ pụtara ịkwalite nrụpụta ma e jiri ya tụnyere Windows, ebe ị ga-enwe nsogbu ole na ole n'ihi mperi, reboots, nseta ihuenyo ma ọ bụ malware. Site na macOS, chefuo ihe ahụ niile wee nwee ahụmịhe ahụ. Na mgbakwunye, ị ga-aga n'ihu na-enwe ike ịnụ ụtọ ụlọ ọrụ Microsoft Office, ebe ọ dị maka ya.
Nhazi ARM: ọhụrụ Apple Silicon ngwaahịa, M1, bụ ihe nhazi nke a na-ekwu maka ọtụtụ ihe, karịsịa banyere iji ebe nchekwa ọ na-enweta (otu isi ihe na arụmọrụ ya, n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe ijuanya na ụzọ ndị ọzọ). Tụkwasị na nke a, ihe nrụpụta a na-arụ ọrụ ike nke ukwuu, na-achịkwa ịgbatị ndụ batrị ahụ ruo n'ókè (ọ okpukpu abụọ). Ma, ọ bụrụ na nke ahụ ezughị gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụlite maka ARM ma zere ịchịkọta obe, olee ụzọ dị mma karịa inwe otu a maka ya ... Na agaghị m achọ ichefu uru ọzọ, na nke ahụ bụ ndakọrịta nke ngwa iOS / iPadOS. ya na ya, nke na-emepe ohere ọhụrụ yana ikekwe ihe kacha nso na njikọta nke a na-ekwu maka ya nke ukwuu. Ụdị dị ka ihe Google Chromebook nwere.
Ihuenyo: Apụl bụ otu n'ime ole na ole na-arị elu Retina panel. Ndị a IPS LED panel nwere mkpebi ka mma, ma maka ihe oyiyi na ederede, nke bụ nnukwu uru. Ọ nwekwara njupụta pikselụ dị elu ya mere nkọ ahụ dịkwa ịtụnanya. Na mgbakwunye, mgbe ị na-eme ka ihuenyo dị nso na anya gị, ha na-enwetakwa nsonaazụ dị mma karịa na panel panel.
Onwe ya: Nke a metụtara gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na mgbe ị na-emepụta OS na ngwaike, ha nwere ike ịkwalite koodu ahụ nke ukwuu ka ha nwee ike iru arụmọrụ nke ndị ọzọ agaghị eme. Nke ahụ, yana ngwaike na-arụ ọrụ nke ọma, na-eme ka otu ndị a nwee otu n'ime nnwere onwe kacha mma dị adị. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị chọrọ batrị nke na-ewe ọtụtụ awa, laptọọpụ Apple bụ ihe ị chọrọ.
Imebe: Otu n'ime ihe ndị kacha pụta ìhè na ụlọ ọrụ a bụ nchacha mma. N'iji ihe ndị dị oke ọnụ na atụmatụ pere mpe yana ahịrị ọgbara ọhụrụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na-apụta mgbe ị hụrụ otu n'ime laptọọpụ Apple ndị a. N'ezie, ọ bụrụla njirimara njirimara nke ndị si Cupertino.
Ntụkwasị obi: Apple na-elekọta nke ọma nkọwa niile, gụnyere QA (Quality Assurance). Ọ bụ eziokwu na a na-arụ kọmpụta Apple n'otu ụlọ ọrụ China dị ka kọmpụta ndị ọzọ, ya bụ, ha na-ekerịta ODM (Ndị na-emepụta ihe mbụ). Dịka ọmụmaatụ, Quanta Computer, AsusTek na Foxconn bụ ndị na-emepụta laptọọpụ Apple, otu ụlọ ọrụ na-emepụta ndị ọzọ dị ka Acer, ASUS, Dell, HP, ma ọ bụ Sony. N'aka nke ọzọ, enwere ntakịrị ọdịiche dị n'ịdị mma n'etiti otu na nke ọzọ, ebe ọ bụ na Apple na-etinye ndị otu ya site na njikwa mma ọzọ iji jide n'aka na ha ruru ụkpụrụ ha chọrọ. Ya mere, ngwaahịa apụl na-adịte aka karị.
Ebe ịzụta MacBook dị ọnụ ala
Apple na-ere ngwaahịa ya site na ikpo okwu webụ ya, ma ọ bụ site na ụlọ ahịa ndị a ma ama anụ ahụ na-ekesa site na isi ihe dị iche iche nke ọdịdị ala. Otú ọ dị, dị ka ị maara, ha adịghị ọtụtụ, ha anaghị erukwa n'isi obodo niile dị anya site na ya. Ya mere, ụzọ kachasị mfe iji nweta laptọọpụ MacBook bụ ịzụta ya n'ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ n'ịntanetị ọ bụla.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọta ya na Amazon, Ngwa PC, El Corte Inglés, Carrefour, wdg. Uru ya bụ nke ahụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile, ọ na-efu otu iheN'adịghị ka ngwa ndị ọzọ sitere na ụdị ndị ọzọ, enwere ọdịiche pụtara ìhè n'etiti ụfọdụ ụlọ ahịa na ndị ọzọ.
Aka abụọ ma ọ bụ laptọọpụ Apple emezigharịrị, ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Dịka m kwuru, ọnụahịa Ọ bụ otu n'ime ihe ọjọọ nke Apple laptọọpụ. Ya mere, ị nwere ike ịchọ ọzọ iji nweta ezigbo Mac na a mma price. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhọrọ:
Nke abuo: ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịzụrụ ngwaahịa aka nke abụọ. Ma ọ bụ ezie na kọmputa MacBook na-adịte aka, ọ bụghị nhọrọ kacha mma. Ị maghị ụdị "ndụ" nke onye ọrụ mbụ gị nyere gị, ma ị nwere ike inwe nsogbu ụfọdụ nke a na-apụghị iji anya gba ọtọ hụ. Ọbụna karịa ma ọ bụrụ na ịzụrụ ya site na nyiwe dị ka Wallapop ma ọ bụ webụsaịtị nke abụọ, kama ịnọ n'ụlọ ahịa ndị nwere ntụkwasị obi nke abụọ na-enye ụfọdụ nkwa.
Emezigharịrị: Nhọrọ ọzọ iji nweta laptọọpụ Apple dị ọnụ ala bụ ịzụta nke emezigharịrị. Ya bụ, ngwaahịa ọhụrụ ndị a na-apụghị ịre dị ka ndị dị otú ahụ maka ihe dị iche iche. O nwere ike ịbụ n'ihi na ọ nweghị igbe mbụ ya, n'ihi na ọ nwere ncha n'elu ụlọ n'ihi njem ụgbọ njem, ekpughere ya na ihe ngosi, ma ọ bụ n'ihi na a ghaghị ịlaghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma rụzie ya n'ihi ụlọ ọrụ mmepụta ihe. nsogbu. Ka o sina dị, ihe ị nwetara bụ akụrụngwa ọhụrụ, EU ejirila iwu mee ka ndị na-eji ụdị ahịa a nwee nkwa dị ka a ga-asị na ọ bụ akụrụngwa nkịtị.
Modeldị ochie: na mgbakwunye na nke abụọ gara aga, ị nwekwara ike ịhọrọ ịzụta obere ihe nlereanya. A ka na-ere ụfọdụ, dị ka ụdị nwere ibe Intel ma ọ bụ ụdị sitere na ndị agadi. Nke a pụtara na ọnụ ahịa ya agbadala nke ukwuu, ebe ọ ka bụ akụrụngwa ọhụrụ ma na-anụ ụtọ nkwa. Naanị nsogbu dị na ụdị akụrụngwa a bụ na ị ga-enwe ngwaike dị obere obere oge, na oge ahụ ga-abịa ngwa ngwa, ebe ọ bụ na MacOS ga-aga n'ihu na-emelite nwa oge, mana ikekwe ị gaghị enwe ike ịgụta ụdị ọhụrụ. (ị maara na Apple na-amachi nke a na ụdị nke ọgbọ ochie).
Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Apple dị ọnụ ala?
Otu n'ime adịghị ike nke Apple laptọọpụ bụ ọnụ ahịa ya. Ha bụ ngwaahịa dị oke ọnụ, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ha. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị na-ezere ụdị ngwaahịa ndị a ma na-ahọrọ ụdị ndị ọzọ. Kama, e nwere nnukwu ohere nke ịhọrọ laptọọpụ Apple dị ọnụ ala, dị ka:
Black Friday: na Tọzdee ikpeazụ nke Nọvemba a na-eme mmemme zuru ụwa ọnụ ebe ụlọ ahịa niile, site na obere na nnukwu ụlọ ahịa, ma n'ebe a na-ere ere na n'ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na-etinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na ngwaahịa ha. Ụfọdụ mbelata teknụzụ nwere ike ịdị elu dị 20% ma ọ bụ karịa, yabụ Black Friday bụ oge dị mma ịzụta laptọọpụ Apple dị ọnụ ala.
Ụbọchị Mbụ: Ọ bụrụ na ị nwere Amazon Prime ndenye aha, mgbe ahụ ị nwere ohere ọzọ dị ukwuu. Ikpo okwu Jeff Bezos ama ama na-enye ndị ahịa ya niile ọnụ ahịa ego pụrụ iche. Ya mere, ị nwere ike irite uru na ha wee nweta ihe ịchọrọ ma chekwaa ihe na ịzụrụ ihe. N'ezie, ị ga-aga n'ihu na-enweta uru Prime, dị ka mbupu n'efu na ngwa ngwa.
Cyber ​​Monday: Monday ka Black Friday nwere ihe omume ọzọ buru ibu. Mọnde a, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-atụpụ ụlọ ahụ na windo na-enye ezigbo onyinye, dị ka nke Black Friday. Ya mere, ọ bụrụ na ị tụfuru ohere na Friday ma ọ bụ ịhụghị ihe ị chọrọ, na nhọrọ nke Laptọọpụ nke Cyber ​​​​Monday chọta ohere ọzọ ịzụta ihe maka obere obere.
Laptọọpụ Apple, ọ bara uru ya? Echiche m
Ị kwesịrị nyochaa uru na ọghọm inwe laptọọpụ Apple. N'otu aka ahụ, otu n'ime ihe ndị kachasị baa uru, dị ka ihe ndị dị na ya, nwekwara ike ịbụ njedebe maka ụfọdụ egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ngwanrọ na-adịghị, nakwa maka ụfọdụ ngwaike ngwaọrụ ndị na-enweghị ndị ọkwọ ụgbọala maka ikpo okwu a.
N'aka nke ozo bu ọnụahịa, nke na-edobe ha n'etiti ngwá ọrụ kachasị ọnụ na ahịa, ọbụna karịa ụfọdụ ngwa egwuregwu asọmpi nwere ngwaike dị elu. Mana ị ga-eburu n'uche na, na nloghachi, ị ga-enweta ntụkwasị obi na ịdịte aka ka ukwuu.
N'ikpeazụ, nke gị M1 Ọ nwere ike ịbụ nnukwu uru ma ọ bụrụ na ị na-achọ nnwere onwe yana ịmalite n'elu ikpo okwu ARM. Mana ọ nwekwara akụkụ ọjọọ ya, ọ bụkwa ihe ị ga-enyocha dịka ikpe gị siri dị. N'echiche a, ị kwesịrị ịma na Windows (na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ) enweghị ike ịwụnye ya n'ihi enweghị nkwado maka M1 mgbe ị na-ewepụ Bootcamp. Ị nwere ike iji ha naanị site na ikpughe anya.
M1 wetakwara njedebe ndị ọzọ, dị ka njedebe nke ebe nchekwa RAM arụnyere, ejikọta ya na enweghị ndakọrịta eGPU.
I kwesịkwara ịma na ụfọdụ sọftụwia ị jiri Apple x86 nwere mgbawa Intel agaghịzi arụ ọrụ na M1 ọhụrụ ahụ. Ọ bụ eziokwu na na Rosette 2 ị nwere ike ịga n'ihu na-agba ngwa ngwa ahụ niile n'enweghị nsogbu, ebe ọ bụ sọftụwia na-enye oyi akwa ndakọrịta nke mere na nke a abụghị oke. Ma, ụfọdụ mmemme, dị ka ndị na-adabere na ntụziaka ụfọdụ ma ọ bụ Intel virtualization technology (dịka: Intel VT), anaghị arụ ọrụ n'ihi na M1 enweghị ihe ndị a. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị ọrụ achọpụtala na ụfọdụ akpa ma ọ bụ mmemme ime ihe, dị ka Docker, anaghịzi arụ ọrụ.
MmechiỌ bara uru ma ọ bụrụ na ị na-achọ ikpo okwu kwụsiri ike, siri ike, ntụkwasị obi, nchekwa na ntụkwasị obi. Ma ọ bụ iji melite arụmọrụ nke ọrụ gị, iji nwee ntụrụndụ n'enweghị nsogbu, ma ọ bụ ịmụ ihe. N'ezie, ihe ọghọm ndị ahụ niile m kwuru na paragraf ndị gara aga anaghị emetụta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ, ebe ọ bụ na ojiji ha ga-enye anaghị egbochi ya. Mana ahọrọ m ikwu eziokwu ma kpọọ ha, ebe ọ bụ na ụfọdụ ndị mmepe ma ọ bụ ndị ọkachamara nwere ike ịhụ ihe omume ahụ a na-atụghị anya ya ...
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Laptọọpụ Apple